ဝတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာပညတ် သင်ခန်းစာ (၄)
၀တ်ြပုခြင်းဆိုင်ရာ ပညတ်သည်များစွာရှိသော်လည်း အရေးကြီးဆုံးသောအရာ လေးခုကိုဖေါ်ပြလိုသည်။ ထိုအရာ များမှာ
၁၊ အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသာ ကိုိကွယ်ရမည်။
၂၊ ဘုရားရှိသောနေရာ၌သာ ကိုိးကွယ်ရမည်၊
၃၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အားဖြင့်သာ ကိုးကွယ်ရမည်၊
၄၊ ယဇ်ကောင်အားဖြင့်သာ ကိုးကွယ်ရမည်၊၊
၁၊ အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရား သာ ကိုးကွယ်ရမည်
ကောင်းကင်ဘုံနှင့် ငရဲ ပိုင်ရှင်သည် အသက်ရှင်တော်မူ သော ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်၊ ထိုဘုရားသခင်ကို မကိုးကွယ်ဘဲ အခြား သော ဘုရားကို ကိုးကွယ်လျှင် မည်ကဲ့သို့ ကောင်းကင်နိင်ငံသို့ ရောက်နိင်မည်နည်း။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်က ဤသို့ ပညတ်ထားခဲ့သည်-ငါမှတပါး အခြားသော ဘုရား ကို မကိုးကွယ် နှင့်။ အထက် မိုဃ်းကောင်းကင်၌ ၄င်း၊ အောက်အရပ်မြေကြီး ပေါ်၌၄င်း၊ မြေကြီးအောက် ရေထဲ၌၄င်း ရှိသော အရာ နှင့် ပုံသဏ္ဍာာန်တူအောင်၊ ရုပ်တုဆင်းတု ကို ကိုယ် အ ဘို့ မ လုပ်နှင့် (ထွက် ၂၀း၃-၄)၊ ထို့ ကြောင့် အခြားသောဘုရား ကိုးကွယ်သောသူသည် ကောင်းကင်နိင်ငံရောက်ဘို့ မရောက်ဘို့ စဉ်းစားစရာမလိုတော့ချေ။ မရောက်ဘို့ ရန်သေချာ ပြီးဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဘုန်းကို အဘယ်သူမျှ မပေးချင်။ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးပေးသောအခါ သူမှတပါး အခြားသော ဘုရားများကို ကိုးကွယ် မှာ စိုးရိမ်သောကြောင့် အခြား ဘုရားများ မ ကိုးကွယ်ဘို့ ရန် အတန်တန် မှာ ထားခဲ့သည်၊ အခြားသော ဘုရားကို သင်သည် မကိုးကွယ်ရ၊ အပြစ် ရှိ ယုံလွယ် အမည် ရှိသော ထာဝရဘုရားသည် အပြစ်ရှိသည် ဟု ယုံလွယ်သော ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူ၏၊ (ထွက် ၃၄း၁၄)၊ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာ ၌ ကြည့်ပါက ဤသို့ တွေ့ရသည် (for you shall not worship any other god, for the LORD, whose name is Jealous God.) ထာဝရ ဘုရားသည် သ၀န်တို တတ်သော ဘုရားဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်၊ သ၀န်တိုခြင်းသည်လင်နှင့်မယားကြား။ ရီးစား ကြား၌ဖြစ်တတ် သော အရာဖြစ်သည်၊ အချစ်ကြီးလျှင် သ၀န်တိုမှုများသည်။
ဘုရားသခင်လည်း သူ့ ကို မကိုးကွယ်ဘဲ အခြားသော ဘုရားကို ကိုးကွယ် လျှင် အလွန်သ၀န်တိုသည်၊ ထို့ ကြောင့် မောရှေ မှတဆင့် ဣသရေလ လူများထံ ဤကဲ့သို့ အထပ်ထပ် မှာထားခဲ့သည်-ငါပညတ်သမျှ တို့ သတြိပုကြလော့၊ အခြားသော ဘုရား ၏နာမကို မမြွက်မဆိုနှင့်၊ သင်၏နှုတ်ထဲ က မြွက်သံကို သူတပါး မကြားစေနှင့်၊ (ထွက် ၂၃း၁၃) ထာဝရဘုရားသည် အခြားသော ဘုရားများကို နှုတ်နှင့်ပင် မမြွက်စေချင်၊ မည်မျှ သ၀န်တိုကြောင်းကို သိနိင်သည်၊
သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ရ မည်။ ထိုဘုရားသခင်ကိုသာဝတ်ပြုရမည်၊၊ နာမတော်အားဖြင့်လည်း ကျိန်ဆိုိခြင်းကို ပြုရမည်၊ အခြားတပါးသောဘုရား။သင့်ပတ် လည့့််နေသော လူမူမျိုးတို့ ၏ဘုရားကိုမဆည်းမကပ်ရ၊ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရသခင် ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့အပြစ် ရှိသည်ဟု ယုံ လွယ်သော ဘုရားဖြစ်တော် မူ၏။ သင်၏ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရားသည် သင့် ကို အမျက်ထွက်၍ မြေကြီးပြင်မှာ သုတ်သင် ပယ်ရှားတော်မူမည်ဟု စိုးရိမ်စရာရှိ၏။ (တရား ၆း၁၃-၁၅) ဘုရားသခင်သည် သူ့ ကို မကိုးကွယ် ဘဲ အခြားသောဘုရား ကို ကိုးကွယ် လျှင် မြေကြီးပြင်မှာ သုတ်သင် ပယ်ရှားတော်မူသည့် တိုင် အောင်အမျက်ထွက်မည့် အရာကို ကြိုတင် သတိပေး တော်မူခဲ့သည်၊ ထို့ ကြောင့် အခြားသော ဘုရား ကိုးကွယ်သူများအပေါ် ထာဝရဘုရားမည်မျှ အမျက်ထွက်တော်မူကြောင်းသိနိင်သည်။ သိလည်းသိသင့်သည်၊ သို့ သော် ယနေ့ခရစ်ယာန်ဟု ဆိုသူများသည် ထိုအရာကို အလေး အနက်မထား။သားသမီးများကိုလည်း ထာဝရဘုရား မကိုးကွယ်သော်လည်း ရာထူး ကောင်းသော။ ချမ်းသာသော သူများနှင့် လက်ထပ်စေချင် ကြသည်၊ ထာဝရဘုရားအားအမျက်နှိုးဆော်ကြသည်။
သင်၏ညီအစ်ကိုရင်း၊ သင်၏သားသမီး၊ သင်၏ရင်ခွင်၌ နေသော မယား။ ကိုယ်ကဲ့သို့မှတ်တတ်သော အဆွေခင်ပွန်း တ စုံတယောက်က။ သွားကြစို့ ။သင်လည်းမသိ။ ဘိုးဘေးတို့ လည်း မသိသော အခြားတပါးသော ဘုရား။ သင့်ပတ်လည်အနီးအဝေး နေသောသူ၊ မြေကြီးစွန်း တဘက်မှသည် တဘက်တိုင်အောင်။ ကိုးကွယ်သော ဘုရားကို ၀တ်ပြုကြစို့ ဟု တိတ်ဆိတ်စွာ သွေး ဆောင်လျှင်။ သင်သည်ဝန်မခံရ၊ သူ့၏စကားကို နားမထောင်ရ၊ သူ့ကြိုမင်သောအခါမသနားရ၊ နှမြောသဖြင့် ဖွက် မထားရ ဘဲ။ သူ့ကို အမှန် သတ်ရမည်။ သူသည် အသေသတ်ြခင်းကို ခံစိမ့် သော။ သင်သည် အဦး ပြုပြီး မှ၊ လူအပေါင်းတို့ သည်ြပုရကြမည်၊ ကျွန်ခံနေရာအဲဂုတ္ထုပြည်မှ သင်တိုို့ကိုနှုတ်ဆောင်တော်မူသော သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံတော်မှ လွဲစေခြင်း ငှာကြံစည်သောကြောင့်။ ထိုသူကို ကျောက်ခဲနှင့် ပစ်၍ အသေ သတ်ရကြမည်။ ထိုသိတင်းကို ဣသရေလ အမျိုးသားအပေါင်း တို့သည် ကြား၍၊ ထိုသို့သော အဓမ္မအမှုကို သင်တို့ တွင် နောက်တဖန် မ ပြုဝံဘဲ နေကြလိမ့် မည်၊၊ (တရား ၁၃း၆-၁၀)၊
ကိုယ်မိသားစုထဲမှ အခြားဘုရားကို ကိုးကွယ် ဘို့ ရန် သွေးဆောင်သူများကို ကိုယ်တိုင် သတ်ရမည်ဟု ဘုရားသခင်ပညတ် ထားသည်၊ ထို့ကြောင့် ထာဝရဘုရားသခင်သည် အခြားသော ဘုရား ကိုးကွယ်သော သူများကို မည်မျှ အလိုမရှိကြောင်းကို ထင်ရှားစွာ တွေ့ မြင်နိင်သည်၊ သို့သော် ယနေ့ ခရစ်ယာန်များ သည် ထို အရာကို အလေး အနက် မထားကြ။
ဘုရားအမြင်၌ အခြားဘုရား ကိုးကွယ်ခြင်းသည် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ခြင်းနှင့်တူ ကြောင်းဤသို့ တွေ့ ရသည် -သင်သည် ယခုသွားသော ပြည်သူပြည်သား တို့ နှင့် မိတ်သဟာယ ဖွဲ့ သဖြင့်။ သင့်အလယ်၌ တိုက်မိ လဲစရာ အကြောင်း မဖြစ်စေခြင်းငှါ။ ကိုယ်ကိုကိုယ် သတိပြုလော့။ သူတို့ယဇ်ပလ္လင်များ ကို ဖျက်ဆီးရမည်။ သူတို့ ရုပ်တုဆင်းတုများကို ချိုးးဖဲ့ရမည၊်၊ သူတို့ ၏ အာရှရပင်များကို ခုတ်လှဲရမည်၊ အခြားသော ဘုရား ကို သင် သည် မကိုးကွယ်ရ၊ အပြစ်ရှိ ယုံလွယ် အမည်ရှိသော ထာဝရဘုရားသည် အပြစ်ရှိသည်ဟု ယုံလွယ်သော ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူ၏၊ သင်သည် ထိုပြည်သူပြည်သားတို့ နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ သဖြင့်၊ သူတို့ သည် မိမိတို့ ဘုရားနှင့် မှားယွင်း ခြင်းကြိုပု၍ ထိုဘုရားတို့ အား ယဇ်ပူဇော်သောအခါ။ သင့်ကို ခေါ်၍ သင်သည် ထိုယဇ်ကောင်ကို စားမည် ဟူ၍၄င်း။ သင်သည် သူတို့ သမီး များ ကိုယူ၍။ ကိုယ်သားတို့ နှင့်ထိမိမ်းမြားပေးစားသဖြင့်။ ထိုသမီးတို့ သည်မိမိမိတို့ ဘုရားနှင့် မှားယွင်းခြင်းကိုပြု၍ သင်၏သားတို့ ကို ထိုဘုရားတို့ နှင့် မှားယွင်းစေမည်ဟူ၍၄င်း စိုးရိမ်စရာရှိ၏၊ သင်သည် ကိုယ်အဘို့သွန်းသော ဘုရားတို့ကို မလုပ်ရ။ (ထွက် ၃၄း၁၂-၁ရ)၊
မြန်မာကျမ်းစာအုပ်၌ “မှားယွင်းသည်” ဟုဆိုသော်လည်း အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာ၌ ပြည့်တန်ဆာလုပ်သည် ဟု ဤကဲ့သို့ တွေ့ရသည်၊
(for you shall worship no other god: for the LORD, whose name is Jealous, isajealous God. 15 "Don't makeacovenant with the inhabitants of the land, lest they play the prostitute after their gods,and sacrifice to their gods, and one call you and you eat of his sacrifice; 16 and you take of their daughters to your sons, and their daughters play the prostitute after their gods, and make your sons play the prostitute after their gods.)(Ex 34:14-16)
ထို့ ကြောင့် အခြားဘုရား ကိုးကွယ်ခြင်း သည် ဘုရားသခင် အလွန်အမျက်ဒေါသထွက်၍ မည်မျှအပြစ်ကြီးကြောင်းကို သိနိင်သည်။ ထိုသို့အတန်တန် မှာထားသော်လည်း ဣသရေလ လူမျိုးများသည် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်ကတည်းက စ၍ ဗာဗုလုန် ကျွန်ခံသည်အထိ ရုပ်တုများကိုသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ ထာဝရဘုရား ယုံကြည်သောဘုရင်များဖြစ်သည့် ဒါဝိဒ်မင်း။ ယေဟောရှဖတ်မင်း။ ဟေဇကိမင်း။ ယောရှမင်းတို့လက်ထက်၌သာ အခြားဘုရား မကိုးကွယ်ဘဲ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကွယ်ကြသည်၊ ပရောဖက်များကိုစေလွတ်၍ သတိပေးသော်လည်း နားမထောင်ကြ။ ဂရုမစိုက်ကြ၊ ထို့ကြောင့် နောက်ဆုံး၌ ဣသရေလပြည်ကို အာရှုရိလက်၌၄င်း။ ယုဒပြည်ကို ဗာဗုလုန်လက်၌၄င်း ကျွန်ခံစေ ခဲ့သည်။ ထာဝရဘုရား ကို မကိုးကွယ် ဘဲ အခြားသော ဘုရားများ ကိုးကွယ် ခြင်းသည် ကောင်းကင်ဘုံရှင် ထာဝရ ဘုရား အတွက် သာမည အပြစ် မဟုတ်။ အကြီးမားဆုံးသော အပြစ်။ အ ပြစ်တကာတို့ ၏ အကြီးမားဆုံးသော အပြစ် ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ယနေ့ ခရစ်ယာန်များ၏အမြင်၌ အခြားဘုရား ကိုးကွယ် ခြင်းသည် အရေးမကြီး၊ ထို့ထက် ကိုယ်ကျင့်တရား ဖေါက်ဖျက် ခြင်းသည် အလွန် အပြစ်ကြီးသည် ဟု ယူဆ ကြသည်၊
၂၊ ဘုရားရှိသောနေရာ၌သာ ကိုးကွယ်ရမည်
နေရာတိုင်း၌ ကမ္ဘာဦးမှစ၍ ပညတ်တော်ပေးသည် အထိ ဘုရားသခင်ကိုမိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်သော နေရာတိုင်း မှာ ကိုးကွယ်နိင်သည်၊ အဗြာဟံ။ ဣဇက်။ ယာကုပ်တို့ သည် ရောက်လေရာအရပ်ရပ်၌ ယဇ်ပလ္လင်များကိုတည်ဆောက်၍ ကိုးကွယ် တတ်ကြသည်၊
တဲတော်၌ ဘုရားသခင်က မောရှေအား သိနာ တောင်ခြေ ၌ တဲတော် ဆောက်ခိုင်းသည်၊ ထိုအချိန်မှစ၍ ဘုရားသခင် အား တဲတော်၌သာ ကိုးကွယ်ရသည်။
ဗိမာန်တော်၌သာ ရှောလမုန်မင်း က တဲတော် အစား ဗိမာန်တော်ဆောက် သောအခါ ဗိမာန်တော်ထဲမှသာ ကိုးကွယ် ရသည်၊ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ဗိမာန်တော်၌သာ ဘုရားသခင် ကျိန်းဝပ်တော်မူခဲ့သည်၊ သို့ သော် ဣသရေလူများသည် သစ္စာမရှိသောကြောင့် ဘုရားသခင်ကိုစွန့်၍ အခြားသော ဘုရားများကို ကိုးကွယ်သော အခါ စိမ်းသောသစ်ပင်အောက်တိုင်းနှင့်တောင်ကုန်းတိုင်းပေါ်၌ ယဇ်ပူဇော်တတ်ကြသည်၊ ထိုသို့ ဖြစ်မည့် အရာကို ကြိုသိသောကြောင့် ဘုရားသခင်က -သင်တို့ သည် မြေကြီးပေါ်မှာ အသက် ရှင်သမျှသော ကာလပတ်လုံး ၀င်စားစေခြင်းငှာ သင်တို့ ဘိုးဘေး ကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်၌ ကျင့်အံ့သောငှာ စောင့်ရှောက်ရသော စီရင်ထုံးဖွဲ့ ချက်များဟူမူကား။ သင်တို့အစိုးရသော လူမူမျိုးတို့ သည် တောင်ကြီး တောင်ငယ်အပေါ်။ စိမ်းသော သစ်ပင်အောက်၌ မိမိ တို့ ဘုရားများကို ၀တ်ပြုရာအရပ် ရှိသမျှတို့ကို ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးရမည၊်၊ သူတို့ ယဇ် ပလ္လင်များကိုလည်း ဖျက်ရမည်၊ ရုပ်တုများကို ဖြိုချရမည်၊၊ အာရှ ရပင်များကို မီးရှို့ရမည်၊ ထုလုပ်သော ဘုရားဆင်းတု များ ကို ခုတ်လှဲရမည်၊ ထိုအရပ်၌ ထိုဘုရားတို့၏ နာမကို ပင်ပယ်ရှင်း ရမည်၊ သူတိုြ့ပုသကဲ့သို့ သင်တို့ သည် သင်တို့ ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအားမပြုဘဲ။ သင်တို့ ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့ အမျိုးအနွယ်ရှိသမျှတို့ တွင် နာမတော်ကို တည်စေ ဘို့ ရာ ရွေးကောက်တော်မူသော အရပ်တည်းဟူသော ကျိန်းဝပ်တော်မူရာ အရပ်ကို ရှာ၍ လာရကြမည်၊ ထိုအရပ်သို့သင်တို့ သည် မီးရှို့ရာယဇ် အစရှိသော ယဇ်များ။ ဆယ်ဘို့ တဘို့ ပူဇော်သက္ကာ။ ချီမြောက်ရာ ပူဇော်သက္ကာ။ သစ္စာ ဂတိနှင့်ဆိုင်သောပူ ဇော်သက္ကာ။ အလိုလိုပြုသော ပူဇော်သက္ကာ မှစ၍။ သိုးနွားတွင် အဦးဘွားသောသားငယ်တိုိ့ ကို ဆောင်ခဲ့ရကြမည်၊ ထိုအရပ်၌သင်တို့ ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ရှေ့ တော်၌ စားရကြ မည်၊ ပြုလေရာရာ၌ သင်တို့၏ဘုရား သခင် ထာဝရဘုရား ကောင်းကြီးပေးတော်မူသဖြင့်။ ကိုယ်တိုင်မှစ၍ အိမ်သူ အိမ်သားတို့ သည် ရပ်လျက် ရွှင်လန်းခြင်းကို ပြုရကြမည်။ (တရား ၁၂း၁-၈)
တွေ့မြင်ရာအရပ်၌ မီးရှို့ရာယဇ်ကို မပူဇော်ရမည် အကြောင်း သတြိပုကြလော့၊ သင်တို့အမျိုးတမျိုးတွင် ထာဝရ ဘုရား ရွေးကောက် တော်မူသောအရပ်၌မီးရှို့ရာယဇ်ကို ပူဇော်၍။ ငါမှာထားသမျှတို့ကိုပြုရကြမည်-(တရား၁၂း၁၃-၁၄)၊ ဟုထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားဖြင့်အ ထပ်ထပ် မှာထားသည်၊ထို့ ကြောင့် ဣသရေလ လူများသည်တဲတော် သို့ မဟုတ် ဗိမာန်တော်၌သာ ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကို ပြုလုပ်ကြသည်၊ သို့သော် အခြားသော ဘုရား ကိုးကွယ်သောအချိန်တွင်မူ နေရာတကာမှာ ကိုး ကွယ်တတ်ကြသည်၊
ဣသရေလလူများသည် တောလည်ရာ၌ တဲတော်ထဲမှဘုရားကိုကိုးကွယ်၍ ယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော် တည် ဆောက်ချိန်မှစ၍ ဗိမာန်တော် ၌ သာ ကိုး ကွယ်လေ့ရှိသည်၊ထို့ ကြောင့်ရှမာရိအမျိုးသမီးက သခင်ယေရှုထံ - အကျွန်ုပ်တို့ ဘိုး ဘေးများသည် ဤတောင်ပေါ်၌ ကိုးကွယ်လေ့ရှိကြ၏၊ ယေရုရှ လင်မြို့သာ ကိုးကွယ်ရမည်ဟု သင်တို့ သည် ဆိုတတ်ကြ၏ဟု လျှောက်လျှင်- သခင်ယေရှုက-အချင်းမိန်းမ။ ငါ့စကား ကိုယုံလော့၊၊ ဤတောင် သို့မလာ။ယေရုရှလင် မြို့သို့ မသွားဘဲ ခမည်းတော်ကို ကိုးကွယ်ရ မည် အချိန်ကာလရောက်ဆဲရှိ၏-ဟုဖြေခဲ့သည်(ယော၎း၂၀-၂၁)၊ သခင်ယေရှုက ကိုးကွယ်မည့်နေရာပြောင်းတော့မည့်အကြောင်းကို ရှမာရိအမျိုးသမီးထံပြော ပြခြင်းဖြစ်သည်၊
သခင်ယေရှု အသေခံသောအခါ ဗိမာန်တော်အထဲမှအသန့်ရှင်းဆုံးနှင့်သန်ရှင်းရာဌါနကို ကာထားသော ကုလားကာသည်ကွဲသွားကြောင်း ဤသို့တွေ့ ရသည်- ထိုအခါ ဗိမာန်တော် ၌ ကုလုလားကာသည် အထက်စွန်းမှ အောက်စွန်း တိုင်အောင် စုတ်ကွဲလေ၏-(မ ၂ရး၅၁)၊အဘယ့်ကြောင့် သခင်ယေရှု အသေ ခံသောအခါ ဗိမာန်တော် ကုလားကာ စုတ်ကွဲသနည်း ဟူမူကား ဘုရားသခင်ကို ဗိမာန်တော်မှကိုးကွယ်ချိန် ကုန်ဆုံးကြောင်းကို ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်သည်၊ ဘုရားသခင်သည်လူဆောက်သောဗိမာန်တော်၌မရှိတော့သောကြောင့်ဗိမာန်တော်၌ကိုးကွယ်၍ မရတော့ ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်သည်၊ ထိုဗိမာန်တော်သည် အေဒီ ရ၀ တွင်ရောမ စစ်သားများ ကဖျက်စီး၍ မရှိတော့ ချေ၊ဣသရေလလူများက အေဒီ ၁၃၅ ခန့် တွင်ပြန်လည် တည်ဆောက်ဘို့ ရန် ကြံစည်သော်လည်း မအောင်မြင် ခဲ့ချေ၊ ယနေ့ တိုင်အောင် ဗိမာန်တော် မရှိသောကြောင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်း မပြုလုပ်နိင်ကြချေ၊ ဣသရေလ များ၏ အဓိက ရည်မှန်းချက်တခုမှာ ဗိမာန်တော်ပြန်လည်တည်ဆောက် ၍ ယဇ်ပူဇော်ဘို့ ရန်ဖြစ်သည်၊ သို့ သော် ဗိမာန်တော် နေရာ ၌ မူစလင်များက ဗလီဆောက်ထားသောကြောင့်သူတို့၏စိတ်ကူး ယဉ်မပြည့်စုံနိင်ချေ၊ ဘုရားသခင်က အကောင်းဆုံးသော အစောင့်များကို ချထားသည်၊ အခြားသူများက ဗိမာန်တော်နေရာကို ပိုင်ခဲ့သည်ရှိသော် ဣသရေလလူများက ၀ယ်ယူ၍ ဗိမာန်တော် တည်ဆောက်လောက်ပြီ၊ ထိုအရာကို သိသော ကြောင့် ဘုရားသခင်က အကောင်းဆုံး အစောင့်များဖြစ်သော မူစလင် များကို အစောင့်များအဖြစ် ချထားခြင်းဖြစ်သည်၊
ယနေ့ ခရစ်ယာန်များက ဘုရားသခင်ကို လူလက်နှင့်ဆောက်သော ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌ ကိုးကွယ်နိင်သည်ဟု ထင်မှတ်ကြသည်၊ တနည်း အား ဖြင့် မှန်ပါသည်၊ သို့သော် မပြည့်စုံချေ၊ ကက်သလိပ်အသင်းတော်သည် ဣသရေလများ လုပ်သော အရာကိုဆက်လက်ထိမ်းသိမ်း၍ သူတို့ ရှိသော နေရာတိုင်း၌ ဗိမာန်တော်များကို ဆောက်ကြသည်၊ သန့် ရှင်းရာဌါနများကို ပြုလုပ် ၍သူတို့ ၏ဘုန်းကြီးများသာ ၀င်ခွင့်ရှိသည်၊ အခြားသော ခရစ်ယာန် အဖွဲ့များသည် ထိုကဲ့သို့သော သန့်ရှင်းရာဌါန မပြုလုပ်ကြသောကြောင့် ဆင်မြင့်ပေါ်၌ လူတိုင်းတက်ခွင့် ရှိကြသည်၊ ကက်သလိပ်များက အရိပ်ကို အတုယူ ထိန်းသိမ်း၍ အခြားသောခရစ်ယာန်များသည် အရိပ်ကိုလည်း မသိထိန်းသိမ်းရမှန်းလည်း မသိ မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်သလို လုပ်ကြသည်၊
သို့ သော်ဣသရေလများ၏ရည်ရွယ်သည့် အတိုင်း ဗိမာန်တော် တည်ဆောက်လျှင်လည်း အကျိုးမရှိချေ၊ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် လူဆောက်သော ဗိမာန်တော်၌ မရှိပြီ၊ ကက်သလ်ိပ်များ ဆောက်သော ဗိမာန်တော်များလည်း အဓိပ္ပါယ် မရှိချေ။ အခြားသော ခရစ်ယာန်များ၏ ဘုရား ကျောင်းများ၌လည်း ဘုရားသခင်မကျိန်းဝပ်ချေ။
သို့ဖြစ်လျှင် မည်သူမှန်မည်နည်း။ ဘုရားသခင်ကို မည်သည့်နေရာ၌ ကိုးကွယ်ရမည်နည်း။ ထိုအရာများကို ဆက်လက် လေ့လာရကြဦးမည်။ ဆက်ဖတ်ပါ။
သင်ခန်းစာ (၄) မေးခွန်းများ
၁။ ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပညတ်၌ အဓိကအချက် လေးချက်များ၊
၂။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဘုန်းကို အဘယ်သူအား ကေးချင်သနည်း။--------------
၃။ ဘုရားသခင်သည် မည်ကဲ့သို့သော ဘုရား ဖြစ်သနည်း။----------------------------
၄။ ထာဝရဘုရားသခင်က- လူများအခြား ဘုရား ကိုးကွယ်ခြင်းကို မည်မျှ မုန်းသနည်း။-------------------
၅။ အခြားသော ဘုရားကိုးကွယ်သူကို မည်ကဲ့သို့ အရေးယူခိုင်းသနည်း။----------------------------------
၆။ အခြားဘုရားကိုးကွယ်ခြင်းသည် ဘုရားအမြင်၌ မည်ကဲ့သို့သော အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်း ဖြစ်သနည်း။-------------------------
၇။ မောရှေ လက်ထက်မှစ၍ ဘုရားသခင်ကို-----------မှာ၎င်း၊ရှောလမုန် လက်ထက်မှစ၍---------------၌၄င်း ကိုးကွယ်ရသည်။
၈။ တဲတော်နှင့်ဗိမာန်တော်မှ မကိုးကွယ်သောအရာသည် အဘယ်ကြောင့် ဘုရားသခင်က လက်မခံနိုင်သနည်း။----------------
၉။ သခင်ယေရှုက ရှမာရိ အမျိုးသမီးကို အဘယ်အရာပြောသနည်း။-------------------------
၁၀။ အဘယ်ကြောင့် သခင်ယေရှု သေသောအခါ ဗိမာန်တော် ကုလားကာ စုတ်ကွဲသနည်း။--------------------
၁၁။ ဣသရေလများ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် အဘယ်အရာ ဖြစ်သနည်း။------------------
၁၂။ ဗိမာန်တော်နေရာ၌ အဘယ်အရာဆောက်ထားသနည်း။------------အဘယ်ကြောင့်နည်း။--------------------------။